सुन्धाराको नारा : झिल्के टावर चाहिँदैन ! – PanchKhal Online
Home/समाचार/सुन्धाराको नारा : झिल्के टावर चाहिँदैन !
काठमाडौं । धरहरा पुनर्निर्माण रोक्न माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ । सुन्धारा मासेर ‘झल्के टावर’ बनाउन खोजेको भन्दै स्थानीयबासीले प्रदर्शन गरेका हुन्।
अहिले निर्माण भइरहेको धरहरा ऐतिहासिक धरहरा नभएको भन्दै उनीहरुले पुनर्निर्माण रोक्न माग गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग धकेलाधकेल समेत भएको थियो ।
बलियो भारत नेपालका निम्ति अनुकुल : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल भारत सम्बन्ध बलियो आर्थिक साझेदारीको जगमा मात्र प्रगाढ बनाउन सकिने बताएका छन् ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले दुई देश एकआपसमा दरिलो विश्वासका साथ सँगसँगै अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘बलियो भारत नेपालका निम्ति अनुकुल हो, समृद्ध भारत नेपालका निम्ति अवसर हो । बलियो र समृद्धि नेपाल भारतका निम्ति पनि अवसर हो ।’
पछिल्लो १५ महिनामा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले चार पटक भेटेको भन्दै उनले भने, ‘यसले हाम्रो अगाडिको यात्रा कसरी तय हुन्छ भन्ने ब्लू प्रिन्ट तयार भएको छ ।’
सन् १९९६ मा भएको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि दुई देशबीच कुराकानी भइरहेको र नेपालको चासोमा भारतको सकारात्मक रहेको उनले बताए । यस्तै ब्यापार तथा पारवहन सन्धी पुनरावलोकनका लागि कुराकानी भइररहेको बताए ।
उनले अरुण तेस्रोसँगै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना छिट्टै सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘पञ्चेश्वर अलिकति अड्किएको छ । यसलाई कसरी टुंगोमा पु¥याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।’
नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिव सिंह पुरीले नेपाल र भारतबीच विन विनको अवस्था बनाएर विकास र समृद्धिको यात्रामा साझेदारी भइरहेको बताए।
दुई देशबीच विगतमा भएका सन्धि सम्झौताले सार्थक परिणाम हासिल गर्नुले सबैलाई उत्साही बनाएको बताए । उनले भने, ‘अब सिधै मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जमा पाइपलाइनबाट तेल आउँछ, हामी परिणाम हासिल गर्दैछौं ।’
विराटनगर चेकप्वाइन्ट सुचारु हुन गइरहेको र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना द्रुत गतिमा बढिरहेको बताए । उनले भने, ‘गेम चेन्जर आयोजनाहरु सफल बनाउँदैछौं ।’ दुई देशबीच विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन भई सफल परिणाम हासिल हुँदा सम्बन्ध मजबुत हुनाका साथै उत्साह बढेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले नेपाल र भारतबीच अबको सम्बन्ध आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
भारतीय लगानी बढीभन्दा बढी भित्रिएर रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महतले भारतको आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशतको हाराहारीमा भएको अवस्थामा नेपालले भोगिरहेको व्यापार घाटा गम्भीर चुनौती रहेको बताए । व्यापार घाटा घटाउन भारतीय लगानी भित्रिएर उद्योगधन्दा खोलिनुपर्नेमा जोड दिए ।
राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपालप्रति चासो र मायाभाव दर्शाउने नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री हुनु नेपालका लागि प्रगतिको अवसर भएको बताए । यसलाई खेर फाल्न नहुनेमा उनको जोड थियो ।
रविलाई लामिछानेलाई थुनामा कसरी राखिएको छ ? एकाबिहानै आयो सनसनीपूर्ण खबर, प्रहरीले समेत यस्तो बतायो